Ungayidweba njani na intombazana kunye nepensile kwizigaba? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokudweba intombazana kwipensile ngamanqanaba?
ukuba zoba intombazana Siza kusebenzisa amanyathelo afanelekileyo ngezantsi. Okokuqala, sibonisa intloko kunye nomzimba, zoba iinwele kunye namehlo (nayiphi na imbonakalo yobuso inokuthi ikhethwe), emva koko uyiguqule ibe ngumntu, emva kokugqiba iingalo kunye nemilenze, unokukhetha iimpahla zokunambitha, kodwa usebenzisa umzekelo wentombazana egqoke nge-sundress. Njengoko umzobo ugqityiwe, siwufaka umbala ngokokubona kwethu. Yonke into ayinkimbinkimbi njengoko kubonakala ngathi kunjalo nje ekuqaleni.
Iziphumo yayintombazana entle enamehlo amakhulu.
Konke kuxhomekeke ekubeni yeyiphi intombazana ethile ye-anime oyifunayo. kuba iintlobo zobugcisa, kwaye, ngenxa yoko, ubuchule buye kakhulu. kodwa ndenze ukhetho oluncinci lweeklasi ezizi-master for phasing ama-heroine aliqela.
Ndiyithandile ngokwenene le mfundo yokuzoba intombazana ye-anime. Kuyinyani, andiqinisekanga ukuba ndingakwazi ukutsala amehlo am ngendlela efanayo - kubonakala kum ukuba le nxalenye yomzobo intsokothile. Kodwa ngokubanzi, ndiyithandile umzobo.
Ewe, nantsi lo mfanekiso wokuqala apho esi sifundo sibukwayo senziwe ngepensile:
Ndicebisa ukubukela ividiyo yomzobo wamantombazana anime.
I-Anime yindlela yokuzoba umzobo waseJapan.Imilo yobuso ihlala ifana noxande nge-chin emxinwa, amehlo kwi-anime ahlala emakhulu. Kwabaqalayo (kuqeqesho) kungcono ukuzoba umgca wokuqala, kunye nokubonisa amalungu omzimba ngohlobo olungunxande (ngokudibeneyo kunye nala malungu).
Ukuzoba intombazana ye-anime kulula kakhulu kwaye kuthatha nje imizuzu embalwa. Ngokukodwa ukuba kukho imiyalelo yamanyathelo ngamanyathelo. Abalinganiswa be-anime banamehlo amakhulu, oku kubalulekile. Zixhobise ngephepha, ipensile kunye nerabha kwaye uqalise. Sizoba intombazana entle kangaka.
Siqala umzobo ngesazobe esincedayo. Njengoko ubona, intombazana inentloko enkulu kunye nomzimba omncinci. Ke ngoko, szoba isangqa esikhulu kunye ne-oval.
Sinika isangqa ubume bentloko, imigca yokumakisha kulo, kwinqanaba apho kuya kubakho amehlo, impumlo kunye nomlomo.
Ngokwesiqhelo phawula imilenze, iingalo.
Sitsala amehlo amakhulu.
Sigqibe umlomo, chaza umphandle wengubo.
Zoba ingubo ngokweenkcukacha.
Sidweba ubuso kunye nezandla, imilenze.
Sisusa imigca eyongezelelweyo.
Intombazana ilungele ukufakwa imibala.
Kufuneka sitsale intombazana ngamanqanaba. Amanqanaba okwakha abonisiwe kula manani.
Ewe kunjalo, ayisizizo zonke izinto eziya kusebenza kanye. Ziqhelanise kwaye uziqhelanise. Phinda ngononophelo imiyalelo enikeziwe yanyathelo nenyathelo kunye ne-animashka entle yamantombazana uya kuphumelela.
Ezi zidalwa zinamehlo amakhulu kangaka ... kubonakala ngathi amaJapan ajongene nohlobo oluthile oluntsonkothileyo malunga noku. Kulungile. Sithatha iphepha kunye nepensile. Sichaza umgca ophakathi wokubamba.
Amehlo (phi ngaphandle kwabo?) Kunye nezandla. Isaphetha. Kwaye konke ukuphumla.
Ubonakala ecaphuka ngento ethile.
Ukuzoba intombazana ngokwamanqanaba? Ukwenza oku, sifuna iphepha, ipensile kunye ne eraser. Kwaye okona kubaluleke kakhulu - iskimu sokuzoba esineenkcukacha. Ndiyakunika:
Umzobo ocaciswe ngakumbi ngomzobo wobuso wentombazana:
sijonga iskimu esineenkcukacha apha.
Ukuzoba ngepensile, kufuneka ujonge imifanekiso engezantsi uze uphinde onke amanyathelo.
Sizoba isiseko somfanekiso wexesha elizayo:
Yongeza iinkcukacha ezinkulu:
Kwaye ngoku sizigqiba zonke iimpahla, kwaye intombazana ilungile:
Nantsi enye inketho, indlela yokutsala intombazana, mhlawumbi le yeyona ndlela ilula, nokuba umntwana unokuyiphatha. Siqala ukuzoba intombazana entlokweni, ngokuthe gqi sigqiba iinkcukacha ezifanelekileyo kumzobo. Kuya kuvela intombazana entle kakhulu.
Imibuzo ye-24 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,460.